September 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မျက်နှာတစ်ခြမ်းရွဲ့ခြင်းတရားခံ မိုးကလည်းဆက်တိုက်ရွာနေတာမို့ ဒေါက်တာစုတစ်ယောက် ချမ်းချမ်းစီးစီး ဆေးခန်းထိုင်နေခိုက်မှာ ဒေါက်ဘုတ်ဆုံတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ သမီးငယ်လေးလက်ဆွဲပြီး ဆေးခန်းထဲသုတ်သုတ်ပြာပြာဝင်လာတော့သည်။ ” ဆရာမ ကျွန်မသမီးလေးလည်း ကျွန်မ အဖေဖြစ်သလို လေဖြတ်ပြီထင်တယ်။ ဒီမယ်ကြည့်ပါဦး” မှန်းစမ်း ဒေါက်တာစုစိတ်ထဲကလေးမလေးကြည့်လိုက်တော့ ၁၅နှစ်သာသာဆေးခန်းကိုလမ်းလျှောက်ဝင်လာနိုင်သားဆိုတော့လေဖြတ်တာတော့မဖြစ်နိုင်။ မျက်နှာသေချာကြည့်လိုက်မှ သူ့မျက်နှာက တစ်ခြမ်းရွဲ့နေတာကိုး။…
သုတ်လွှတ်စောခြင်း သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်း ချိန်သားကိုက်မှုဆိုသည်မှာ ချစ်မှုရေးရာတွင် အဓိက အခရာပင်ဖြစ်သည် ။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့ orgasm ဟာ အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်စောလေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဖြစ်နည်းလေ့ရှိပါတယ် ။ နှစ်ဦးလိင်စိတ်အထွဋ်အထိပ်မရောက်မီ အချိန်စော၍ ကိစ္စပြီးမြောက်သွားသာ အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်ကျေနပ်မှုမရဘဲ…
စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့သားသားလား အတက်ရောဂါဆန်းတစ်မျိုးပေလား အတက်ရောဂါလို့ပြောလိုက်ရင် တစ်ဂီးဂီးတစ်ဂစ်ဂစ်နဲ့တက်ပြီး ခြေတွေလက်တွေကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုပဲ လူတွေမျက်စိထဲမှာအရင်ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းအနည်းငယ်ခန့် ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်ကာ လုပ်လက်စတွေရပ်တန့်သွားစေတဲ့အတက်ရောဂါတစ်မျိုးလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါကိုတော့ဆေးပညာအခေါ်အရ Absence Seizure လို့ခေါ်ပါတယ်။ Absence Seizure ဟာ ဆယ့်စက္ကန့်ခန့်ကြာပြီး တက်နေသူဟာ မတက်ခင်ကပုံစံလေးအတိုင်း…
ကလေးငယ်များနှင့် တီဘီဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ တီဘီရောဂါကို လူအများစုက အဆုတ်နာအနေနဲ့အသိများကြမှာပါ။ တီဘီရောဂါဖြစ်ရင် ရင်ဘတ်အောင့်တယ်၊ ချောင်းဆိုးတယ်၊ သွေးပါတယ်၊ စသဖြင့်သိကြပါတယ်။ တီဘီရောဂါကအဆုတ်မှာ အဆိုပါဝေဒနာတွေဖြစ်စေသလို တစ်ကိုယ်လုံးပျံ့သွားရင်လည်း ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အူတွေရောက်သွားရင် အူတီဘီ၊ ဦနှောက်အမြှေးပါးကိုရောက်ရင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တီဘီဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ပင်မအာရုံကြောစနစ်မှာ ဦးနှောက်ရယ်ကျောရိုးမကြီးရယ်ပါဝင်ပြီး ရောဂါပိုးတွေမဝင်နိုင်အောင်…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် အုန်းရည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကို အုန်းရည်သောက်ခိုင်းတဲ့ အလေ့အထဟာ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ မက တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ ခေတ်စားပါတယ်။ အုန်းရည်ဟာ သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ အတွက် သာမန်လူတွေအတွက်ရော ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အတွက်ပါ ကောင်းပါတယ်။ ချွေးထွက်များတဲ့ အခါ၊ ဝမ်းလျှောတဲ့ အခါ…
ကလေးပျက်ကျပြီးနောက် ဘယ်လောက်အကြာမှာ gym ပြန်ဆော့လို့ရပြီလဲ ကလေးပျက်ကျခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သက်ရောက်မှုများစွာရှိပါတယ်။ကလေးမပျက်ကျမီ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကြာမြင့်ချိန်အတိုအရှည်ဟာ နာလန်ပြန်ထူဖို့အချိန်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ကိုယ်ဝန်နုစဉ်မှာ ပျက်ကျတာဟာ ကိုယ်ဝန်လရင့်စဉ်မှာပျက်ကျတာထက် ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ မြန်ဆန်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးတဲ့နောက် တစ်ပတ် သို့မဟုတ် ဆယ်ရက်အတွင်း လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲအနားယူသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာတော့ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ တရားထိုင်တာမျိုးတွေနဲ့…
ဂနိုရောဂါ ဆိုတာဘာလဲ ? ဂနိုရောဂါ ဆိုတဲ့ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါလို့လဲ ခေါ်ကြပြီး အဓိက လိင်ဆက်ဆံရာမှ ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ဂိုနိုကောကပ် ( Gonococcus ) ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ် ။ ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ ? အကာအကွယ်မဲ့…
သင့်ကလေးမှာ အကြားအာရုံချွတ်ယွင်းမှူရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ သင့်ကလေးရဲ့ အကြားစွမ်းရည်ဟာ သူ့သင်ယူနိုင်မှူအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆရာဝန်တွေ… ကျွမ်းကျင်သူတွေ စက်နဲ့ စမ်းသပ်ပေးခြင်း( hearing screening) ကနေ… သင့်ကလေးအကြားအာရုံပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်သလို …. ကလေးကိုစောင့်ရှောက်သူ ဒါမှမဟုတ် ကလေးမိဘတွေကလည်း အကြားအာရုံ…
ကလေးများအတွက်နို့အန်ခြင်း ကလေး၁၀ယောက်တွင် ၅ယောက်ခန့်သည်နို့အန်တတ်သည်။ များသောအားဖြင့် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အဖြစ်အများဆုံးအရွယ်မှာ ၄လသားအရွယ်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ၆လ၊၇လသားခန့်တွင်ပျောက်ကင်းလေ့ရှိသည်။ သို့သော်အချို့မှာ ၁နှစ်အရွယ်မှပျောက်သည်။ ကလေးများနို့စို့လျှင် နို့ရည်နဲ့အတူလေများပါ အစာအိမ်ထဲသို့ရောက်သွားပြီး ထိုလေများပြန်တက်လာသည့်အခါ နို့ရည်အချို့ပါ ပါးစပ်(သို့)နှာခေါင်းမှပြန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ကလေးအချို့သည် သူတို့အရွယ်အစားနှင့်စာလျှင် အလွန်နို့စို့သောကြောင့် ပိုလျှံနေသောနို့များပြန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရွယ်ကလေးများတွင် အစာအဝင်အထွက်ကိုထိန်းညှိပေးသော…
” အိပ်ပျော်နေစဉ်သုက်ထွက်ခြင်း ” အိပ်ပျော်နေတုန်း သုက်ထွက်တယ်ဆိုတာ ကြားရတာနည်းနိုင်မှာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ အိပ်ရာကနိုးလာချိန်မှာ ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးစူးစမ်းတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။ အယောက်100မှာ 4ယောက်ကနေ8ယောက်အထိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ အဆိုပါအခြေအနေဟာ ရောဂါမဟုတ်သလို ပုံမမှန်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ လူပျိုဖော်ဝင်တာ၊ အပျိုဖော်ဝင်တာရဲ့…